Wararka Maanta: Isniin, May 18, 2020-Puntland iyo Somaliland oo xayiraadii ka qaaday Qaadka imaan jiray degaanadooda
Somaliland ayaa sheegtay iyadoo fulinaysa heshiis ay la gashay ganacsatada Qaadka in ay fasaxday keenitaanka Qaadka, inkastoo ay raacisay awaamiir caafimaad, si loo ilaaliyo caafimaadka bulshada.
Maaamulka Puntland ayaa isna soo saaray bayaan uu ku sheegayo Laga bilaabo maanta oo ah 18ka May 2020 in xayiraadii laga qaaday ka ganacsiga Qaadka, waxaana loogu baaqay dadka Qaadka keena inay ilaaliyaan oo ay ku dhaqmaan talooyinka caafimaadka.
Puntland ma sheegin sababta ay ku fasaxday Qaadka, balse wuxuu go’aankaan qeyb ka ahaa xayiraad guud oo laga qaaday isu socodka dadka, xarumaha ganacsiga iyo Keenista Qaadka ee deegaanada Puntland.
Labada maamul ayaa maalmihii lasoo dhaafay dagaal adag kula jiray dadka sida sharci darrada ah Qaadka kusoo galiya degaanadaas.
Xayiraadaan laga qaaday qaadka ayaa kusoo aadaysa iyadoo weli ay sii kordhayso faafitaanka iyo halista cudurka Covid19.
Wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa dhawaan ka digtay halista caafimaadka ee Qaadka iyo sida uu uga qeyb qaadan karo faafitaanka cudurka Coronavirus.